Tafakatra Amin’ny Fiadiana Ny Tompon-daka Maneran-tany Ho An’ny Baolina Kitra i Japana, Miparitaka Ny Lazan’ny Fahaizan’ny Mpitandro Filaminana Mifehy Vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2013 23:18 GMT
Ireo Japoney mpitia baolina kitra dia matetika antsoina hoe “hooligan” hendry. Mifanao “peo ny dimy” am-pilaminana izy ireo no sady mihirahira hoe “Arahabaina”. Saingy ho an'ny manampahefana Japoney, manambana foana ny risika mety hisian'ny fikorontanana sy loza rehefa amin'ny toerana vory vahoaka.
Ary tsy niavaka tamin'izany ny tamin'ny alin'ny 4 Jona 2013, raha nankalaza an'i Japana ireo mpitia lalao baolina kitra noho izy ekipa voalohany tafakatra handray anjara amin'ny lalao baolina kitran'ny FIFA 2014 . Nandritra ireo fankalazana, nisongadina ny mpitandro filaminana raha nandray fanamafisam-peo mba hitarihana ireo vahoaka marobe teny amin'ny faritra malazan'i Sibuya, Tokyo izy ireo.
Ity horonantsary avy amin'ny mpampiasa YouTube yuuhei1987 ity dia mandrakitra ny zava-mitranga feno fientanentanana:
Teo amin'ny sampanan'i Shibuya rakotra vahoaka izay nahitàna mpitandro ny filaminana anjatonjatony nifampizarazara hanakana lalan’ny mpandeha tongotra, io mpitandro filaminana amin'ny horonantsary manaraka io no nandray ny fanamafisam-peo ary niteny mba hilaminan'ireo vahoaka marobe.
Marobe no nanatri-maso izany tamin'ny fampitàna mivantana tao amin'ny vohikala NicoNico Live any Japana [ja] ary nidera ny fomba niresahan'ilay mpitandro filaminana tamin'ireo mpijery. Tao amin'ny aterineto, nanomboka niantso azy ny olona hoe “mpitandro filaminana DJ” tahaka ny mpanolotra mahay miteny amin'ny fampielezam-peo. Nanjary lasa adihevitra niparitaka izany.
Miteny toy ny tena mpanolotra fandaharana ilay mpitandro ny filaminana. Aleo hadikako an-tsoratra izay lazainy amin'ny vahoaka;
“Mpanohana ny ekipa Japoney avokoa isika rehetra. Fantatrareo fa manaraka tsara ny fitsipika ireo mpilalao ary ampy fahaizana tsara. Noho izany aleo isika hiaraka hanaraka ny fitsipika! Faly aho noho i Japana tafakatra amin'ny lalao iraisam-pirenana. Niady ho azy ireo aho tao am-poko saingy fantatrareo fa manana ny asako aho. Ankehitriny dia aleo isika hanaraka ny fitsipiky ny fifamoivoizana!”
Izay ary fa miteny indray ny mpitandro ny filaminana DJ. “Tsy te hahita olona haratra aho androany. Anton-javatra maro no mety mahatonga fifandirana ratsy ho anareo rehetra amin'ity vokatra mahafinaritra azontsika androany ity tamin'ny lalao baolina kitra. Andao hanandrana hitandrina ny tsirairay mba tsy hahery setra mandritra ny lalaon'ny ekipantsika. Ankehitriny ndeha hohalalahintsika ny lalàna sady handeha mankany amin'ny fiantsonana isika!”
Raha nanasongadina ny korontana sy ny “hooligan” mpankafy ny vaovao tamin'ny fahitalavitra, ireo mpampiasa media sosialy kosa nanasongadina ilay mpitandro filaminana [ja] ary nanindry momba ireo mpanohana azo alamina sy ireo tranga anaty filaminana
Tsy misy azoko eritreretina afa-tsy ny hoe tena firenena milamina i Japana. Any amin'ireo firenen-kafa, mikorontana ry zareo na mandresy na resy. Mieritreritra aho fa ny fomba fitondran'ny tompon'andraikitra ny vahoaka dia hafa mihintsy aty Japana ary tsy misy firenena mitovy aminy.
Hoy ny mpitandro ny filaminana DJ “Jereo, faly daholo ireo mpitandro filaminana mpanara-maso rehetra ato anatiny mahita fa tafakatra amin'ny Fiadiana izay ho Tompon-daka i Japana. Tsy te hikiakiaka aminao amin'izao androm-pifaliana izao izahay. “
Mampihomehy ahy izany satria tena milamina tokoa ity firenena ity
Karazana fandaharana maro tamin'ny fahitalavitra no tsy mitsahatra ny mitatitra mikasika an'i Shibuya anaty fikorontanana. Saingy ny marina, voafehy tanteraka ireo vahoaka tamin'ny fanomezan-danja ny toeran'ny tsirairay. Asa mahatalanjona ataon'ny mpitandro ny filaminana Japoney.